SIDA LOO DARYEELO DAAWADA PELARGONIUM, TALOOYIN WAXTAR LEH UBAXLAYAASHA - DHIRTA GUDAHA
Dalka hooyo ee pelargonium waa Hindiya iyo Koonfur Afrika.
Dhirta caleemaha dhalaalaysa ee leh caleemo cagaaran oo caleemo cagaaran ayaa la og yahay maaha oo kaliya quruxdiisa iyo carafka, laakiin sidoo kale waaxyaha dawooyinka, iyo ehotariyeyaashu waxay aaminsan yihiin in pelargonium ee guriga uu nidaamiyo cimilada maskaxeed ee qoyska.
Pelargonium - dhirta qoyska qoyska. Botanistu waxaa ku jira 280 nooc, noocyo iyo Beelaha ubaxa. Noocyada ugu caansan iyo kuwa jecel ee beeraleyda geranium tixgelin faahfaahsan.
Zone Pelargonium. Kuwani waa ubaxyo leh laba-, midabka saddex-midab leh ama qaabab tayo leh. Mararka qaarkood on tufaax la arki karo foomka of ukunta, waa ka sii madow ka badan midabada ugu weyn. Noocyada ugu caansan ee aagga geranium: Alice, Angelica, Bolero, Flamenco, Diana-Louise, Connie, Tuscany iyo Fantasia. Ubaxyada waa cirifka (illaa 10 cm oo dheer) iyo dheer (illaa mitir dherer).
Royal Pelargoniums. Dumarkaasi, siday u kala horreeyaan, magacu dalbado iyo kuwa madaxbannaan. Xilliga jiilaalka, marka dhirta ay tahay nasasho, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka hawada oo aan ka yarayn 10 ° C. Dhirta cirridka waxaa lagu kala soocaa ubaxyo waaweyn oo leh joodariyado dalool ah. Noocyo guul leh: Princess of Wales, Turkiga.
Malaa'igta Cudurka fayraha ee kuwan cirridku waxay u eg yihiin fareemka. Dhirta Tani waxay koraa ilaa 30 cm ee dhererka iyo blooms inta lagu jiro xagaaga xagaaga oo leh jilicsan, inflorescence falla. Noocyada ugu jecel ee bannaanka u: Night Black, Angelys Bicolor iyo Madame Layal.
Ivy Geranium Warshadu waxay leedahay caleemo cagaaran oo cagaar ah, hareeraha shimbiraha ah iyo ubaxyo laba jibbaar ah. Midabka tufaaxa waxaa matalaya palette laga bilaabo caansaan si midab leh. Noocyada caadiga ah ee beeralayda ubaxyada: Xayawaanka-o-maalinta, Barafku wuu kacay. Antique iyo Bernardo.
Qalabka Pink Waxaa jira qiyaastii 170 nooc oo Pelargonium ah. Heerka dhirta waxaa laga yaabaa inuu ka badan yahay mitir, jirku waa mid culus, oo leh qayb hoose.
Caleemaha waa weyn, cufan, sida haddii loo qaybiyo qaybo badan. Ubaxa wuxuu sameeyaa dallad-sida duufaanka, mararka qaarkood ilaa 12 ubax.
Ma taqaanaa? Si aad u hesho saliidda ubaxyada, 1847, beerashada waxaa lagu beeray Faransiiska ee beerashada mass ee geraniums pink. Ka dibna wax soo saarka ayaa loo wareejiyey jasiiradda Bourbon, tan iyo saliidda geranium waxaa badanaa la yidhaahdaa saliid bourbon.
Qalab adag Warshadan leh ubaxyada terry, markaad taabatay, soo saarto caro aad u dheer. Noocyada xiisaha leh waxay soo saaraan pelargonium leh aromas: cirbadaha, qumbaha, cawska, shubanka, dhirta iyo kuwa kale oo badan. Noocyo gaar ah oo kala duwan oo loo yaqaan 'pelargonium': Brilliant (dhadhan curuud ah), Citronella, Rooti yaryar iyo Ginger (dhadhanka ginger).
Talooyinka Daryeelka Caafimaadka ee Pelargonium
Marka aad iibsanayso dhirta ha ku degdegin si ay u ogaadaan meel u dhow dheriga hadda jira. Marka hore, si taxadar leh u baaro pelargonium: haddii ay jiraan wax cayayaanka ah (waxaad infakshin kartaa ubaxyo kale) ama cuduro. Haddii dhirta ay sax tahay, go'aamiso meesheeda, iyo sida loo daryeelo daawada pelargonium, ka fiirso faahfaahin hoose.
Heerkulka ugu fiican iyo iftiinka
Shuruudaha ugu muhiimsan ee nidaamka heerkulka ee raaxada ugu badan ee ubaxyada: muddada koritaanka - + 20 ... +25 ° C, xilliga qaboobaha ee nasashada - + 12 ... + 15 ° C. Geedkuna wuxuu jecel yahay kulaylka iyo iftiin badan, waxay fiicnaan lahayd inay bixiso hawo cusub iyo qoyaan dhexdhexaad ah meeshii Pelargonium lagu hayo.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, warshadu waxay ku jirtaa xaalad nasasho, muhiim maahan in la quudiyo.
Inkastoo Pelargonium jecel yahay iftiin, Xilliga xagaaga waa in lagu nadiifiyaa hooska qorraxda tooska ahsi looga fogaado gubashada. Xilliga qaboobaha - si loo siiyo muuqaal macmal ah. Laga soo bilaabo iftiin weyn oo weyn, dhirta ka lumay, dhoobo, iyo halkii ubax, waxay ku kordhisaa xoogga koritaanka.
Waqtiyada kala duwan, nooc ka duwan ee waraabka ee pelargonium ayaa loo baahan yahay. Xilliga xagaaga, inta lagu jiro xilliga koritaanka iyo ubax, waxaa loo baahan yahay waraabin joogto ah: maalin kasta ama maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, kormeer xaaladda xaaladda ciidda - qoyaan xad dhaafka ah ayaa burburin doona nidaamka xididka.
Xilliga qaboobaha, pelargonium ma aha mid firfircoon, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad biyo ku shubto laba ama saddex goor bishii. Mastareynta ubaxyada iyo caleemaha waa wax aan loo baahnayn.
Laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta, dhirta waxaa la quudiyaa laba jeer bishii. In ciidda loogu talagalay pelargonium waa ka fiican in la sameeyo halabuurka dareere, ka hor quudinta ciidda waa in la qoyan.
Bacriminta oo leh tiro badan oo nitrogen ah ayaa ku haboon koritaanka cagaarka, ubaxu wuxuu kicinayaa bacarimid iyada oo la kordhiyay maadada fosfooraska iyo potassium.
Boqolkiiba qaybta ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ayaa laga heli karaa xirmooyinka daroogada.
Pelargonium waxaa lagu faafin karaa laba hab oo kala duwan: abuur iyo isugeyn. Ka feker, miraha dacaayad oo kaliya dhirta ka tirsan noocyada aagga, meelaha kale ee geranium ku faafay jarida.
Xiiso leh Halyeeyada Bariga Dhexe, waxaa la yiraahdaa "Geranium" waa geed cagaar ah, oo ah nabi Mahomet, oo ku dul socda buuraha, dhidid, uusoo dhajin jirtey barkad fool xun oo qalalan. Bushku wuxuu u jeestay qorraxda, isla markiiba wuxuu qalajiyey kabtanka. Naxariis, Nebi wuxuu siiyey ubax qurux badan leh caraf udgoon.
Wixii habka abuurka taranta, qaado sanduuqa for geedo. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dhulka guud ee laga helo dukaamada: waxaa ku jira dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah.
Seeds lagu beeray qoto dheer oo ah nus mitir, meel fog oo midba midka kale ka mid ah. Ka dibna la waraabiyo oo ku rid meel diiran oo dab ah (+20 - +25 ˚C).
Iyadoo sugaya geedo, qoyaan si joogto ah ciidda. Geedka ugu horreeya ee abuurka pelargonium wuxuu ku dhalan doonaa toddobaad ama laba, iyadoo ku xiran noocyada. Marka caleemaha ka muuqdaan on sprouts, beerista caleemaha dheriyo gooni ah. Dhowr bilood gudahood dhirta ayaa bararaysa.
Aynu ogaanno sida loo dardar galiyo guriga marka la goynayo. Ujeedooyinkaas, dooro "deeq-bixiye" caafimaad leh. Xulashada ugu wanaagsan - warshad aan waqti u lahayn in la barbardhigo oo aan haysanin laanta ballaaran.
Bishii Maarso, guntooda oo ay leeyihiin qaar badan oo muhiim ah ayaa la jarayaa. Waxa lagu jarjarey xagasha qummanaanta oo la qalajiyey ilaa 10 saacadood. Geedo la beeray waxaa lagu beeray carrada qoyan ee caalamiga ah, oo ku daboolan caag balaastig ah.
Si looga fogaado guntooda kallanaatka, waxaad u baahan tahay inaad sii waddo +23 C. 3 toddobaad ka dib, dhirta xididada waxaa lagu beeray dheriyo kala duwan 14-17 cm dhexroor. Isla sannadkaas waxaad ku farxi kartaa ubaxyada pelargonium.
Gooyo iyo dibudhisid ubax
Wixii ubax qurux badan oo jilicsan, si ay u noolaadaan oo ay sameeyaan baadiyaha quruxda badan, pulargonium prune. Nidaamka waxaa la fuliyaa ka hor inta caleemaha la kala fidiyo.
Fara badan oo lakulmay, mindhicirta la gooyey mindi laga jaray tuubada. Horumarka saxda ah ee laamaha waa in la fiiriyaa muddada firfircoon ee pelargonium. Caleemaha waa inaysan dhexgalin midba midka kale, oo sii koraya. By manjooyin laanahan sida, aad dhigay jihada koritaanka laanta dhinaca.
Haddii aad xiiseyneysid in aad guriga ku dhalatid pelargonium, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid goorta aad u baahan tahay daawada pelargonium, iyo xeerarka la raacayo. Labadii sanaba mar, dhirta dhalinyarada ah waxay u baahan yihiin beerista: beerashada, nidaamka xididka ayaa buuxiya dheriga oo dhan, dhirta si dhow, iyo ma si fiican u Bloom. Samee nidaamkan guga hore.
Diyaari wax kasta oo aad u baahan tahay: dheri cusub, ciid, biyo waraabin iyo dheecaan. Biyaha, waxaad isticmaali kartaa qumbaha webiyada yar. Si dhirta loo dhigo oo aan laheyn waxyeello si ay uga soo baxdo dheriga, ku shub oo ku dhaq hoose hoose ee weelka. U hubso inaad hubiso haddii dhirta ay caafimaad qabto.
Geranium waxaa la dhigayaa dheri si daadi ah, waxaan buuxinno ciidda qoyan horay loo sii mariyey meelaha bilaashka ah ee derbiyada taangiga iyo ubaxa. Xayawaanka si fudud u tamp, ka dibna ku shub kuna rid meel mugdi ah toddobaadkii. Toddobaad ka dib, u wareeji pelargonium meel joogto ah. Waxaad bilaabi kartaa quudinta ugu yaraan 2 bilood.
Qaar ka mid ah xeerarka geedka geraniums ee dhulka u furan
Diiwaangelinta dhirta dacha ee ubaxa waxay u baahan tahay in ay tixgeliso dhawr dakhligood.
First of dhan, waa meelo cadceedu furan, hooska yar oo aan waxyeello, gaar ahaan cimilada kulul.
Digniin! Markaad dooratid meel loogu talagalay xajiinta, fiiri heerka biyaha dhulka hoostiisa. Nidaamka xididka Geranium oo leh qoyaan xad dhaaf ah ayaa bilaabi doona inuu qudhmo.
Marka laga beerto dhul furan waa in ay tixgeliyaan ka kooban. Ciidda khudradda leh qaab dhismeedka nalka iyo dabeecadaha wanaagsan ee biyaha ku jira waa jawiga ugu wanaagsan ee koriimada iyo ubaxa ee jelanium.
Xilliga dayrta, marka dabacsan ee ciidda, ku dar Bacriminta macdanta ama arrinka organic. Ha u oggolaanin ciidda inay qalajiso, abaabulid biyo joogto ah, laakiin dhexdhexaad. Ha halis gelin inaad ka baxdo xilliga jiilaalka dhulkuu furan yahay, waxaa fiican in la qodo pelargonium oo ka baxo jiilaalka guriga.
Geranium, sababtoo ah ka kooban halabuurka, waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh ee daawada iyo qurxinta. Waxaa ku jira fiitamiin badan, pectin iyo acids organic, carbohydrates, fareeshka, phytoncides, kalsiyum, fareeshka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah. Waxyaabaha waxtarka leh ee laga helo laanta, caleemaha, xididdada iyo ubaxa yurub.
Waxyaabaha laga helo saliida jelnium laga helay caws iyo saliida waxaa lagu arki karaa qaab kiniin ah. Wareegyo badan oo loo isticmaalo gogol-xaaro, fusbar iyo loosisyo ujeedooyin daaweyn. Guryaha bogsashada waxay leeyihiin ficil fara badan: waxay ka caawiyaan dhalmo la'aanta, hoos u dhigidda cadaadiska, si caadi ah u wareega wareegga dhiigga iyo dheefshiidka, joojiso dhiigbaxa, yareynta neefsiga.
Xusuuso! Isticmaalka saliidaha lagama maarmaanka ah waxaa jira khilaaf - xilliga uurka iyo nuujinta.
Qalabka Geranium waxaa loo isticmaalaa diyaarinta serum ka soo horjeeda aaladda masaska. Qalabka waxtarka leh wuxuu ka hortagaa hurdo la'aan iyo nooc kasta oo xanuun ah.
Geranium wuxuu awoodaa in uu bogsiyo nabarrada, gubashada, sariiraha. Xaaladaha cudurada catarrhal: otitis, rhinitis, faryngitis, caleemaha caleenta ayaa loo isticmaalaa. Marka cudurrada maqaarka sameeyaan kareemo ka soo decoction ee caleemaha geranium.
Warshadu waxay ka caawinaysaa in laga guuleysto niyadjab iyo walbahaar. Marka lagu daro daawada, pelargonium waxaa loo isticmaalaa kiknoolajiyada. Wixii dib u nooleynta jirka iyo xoojinta timaha - decoctions iyo tinctures, saliidaha lagama maarmaanka ah. Dumarka ayaa qadarin doona saamaynta faa'iido leh ee geedka marka muuqaalka muuqaalka cellulite.
Erayo yar oo ku saabsan geranium ee nolol maalmeedka. Haddii aad leedahay xayawaan, caleemaha jilicsan ee pelargonium waxay kaa caawineysaa in ay ka takhalusaan tuubada. Carafka cayayaanka ayaa ka soo baxaya cayayaanka dhiigga ku jira iyo duqsiyada guriga, nadiifi hawada nijaasta waxyeelada leh.
Maxaa la siin karaa digaagga
Sida loo yareeyo yaanyada xilliga qaboobaha ee qaboojiyaha iyo waxa la sameeyo iyaga
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka cayayaanka "Calypso"
Sida loo kobciyo eu magaciisa guriga ku yaal
Fasalka Master macmiilaha: intee in le'eg cunto kabbeeye cusub, si aanay u dhicin saxan dhamaystiran?
Way adag tahay in la helo beerta qurxinta leh ee aan ku mashquulin qajaarka. Laakiin xitaa wuu ogyahay in guusha ee sii kordhaya dalagga beerta this ku xiran tahay doorashada saxda ah ee kala duwan ee dhirta. Wixii beereed ee dhulka u furan waa mid ku haboon fasalka "Adag". Cucumber "Courage F1": Tilmaamaha kala-duwanaanta Qeexida qajaarka "Dareemaha" waxaa ku jira warar sheegaya in dhirta ay calaamad u tahay nooca haweenka ah ee ubax. Read More
Fikradda ganacsi u gaar ah: iibinta alaabo bey'adeed oo saaxiibtinimo leh